vahaolana - Tanzania Crusher
Fambolena fitrandrahana angady
article from: vahaolana | | fotoana: Aogositra, 2013 | tag: vahaolana
Fambolena fiompiana fambolena Taorian'ny fiantraikany tamin'ny famoahana, ny fomba fitrandrahana fitrandrahana an-tsokosoko dia ahitana ny fantsom-baravarankely, sehatry ny media mavesatra, ary ny fitrandrahana. Ny milina fanasan-damba dia matetika ampiasaina amin'ny asa mahazatra mba handrisika sy hikotrika tanimanga ary fananana hafa tsy voaporofo avy amin'ny vondron'orin-kohaka. Ny mpihaza manerantany dia mety mila mampiasa milina fanasan-damba raha tsy manala ireo sazy tsy azo ialana ireo ny fanesorana ny gorodona. Sarotra be ny fisintahana ny media, saingy mety ho ny fomba azo ampiharina amin'ny mpamokatra iray ihany no mahaliana ... hamaky bebe kokoa...
Fitrandrahana famokarana fitrandrahana manerantany Ny famotehana angady dia ny dingana voalohany amin'ny fanodinana dia manomboka aorian'ny fitrandrahana avy amin'ny tranobongo na ny lavaka. Ny dingana voalohany amin'ny ankamaroan'ny asa dia ny fihenam-bidy sy ny fikajiana amin'ny fako. Ao amin'ny orinasa manasitrana fitrandrahana dia misy skalping, Scalping amin'ny Aggregate crushing plant Scalping matetika dia ampiasaina mba handoavana ny fahamendrehana amin'ny milina fototra maivana mba hanatsarana ny famatsiana herinaratra. Ao anatin'ny dingam-pandrefesana, dia tapaka ny ampahany voa maina ary avy eo dia averina indray ... hamaky bebe kokoa...
Fitrandrahana fitrandrahana tanteraka ho an'ny orinasa famokarana
Ny dingam-pamokarana angon-drakitra ho an'ny famokarana fambolena Fitrandrahana Extraction dia ahitana ny fanesoana, ny famoretana sy ny fanodinkodinana, ary ny poti-bato na ny fandrindrana fasana. Ankehitriny, lazao anao ny fitaovana famokarana angona azo avy amin'ny hatsarany. Ny fanesorana amin'ny dingan'ny fitrandrahana tanteraka Ny dingana voalohany, ny Mpanjifa dia mitaky ny fepetra fanontana amin'ny antsipirihany momba ny fametraham-bola tsirairay isaky ny vola. Ao amin'ny dingam-pamokarana angon-drakitra, fanitsakitsahana tafahoatra sy ny fahaketrahana eo amin'ny rindrin'ny vato ... hamaky bebe kokoa...
Ny fiantraikany be dia be
Ny fiantraikany mahery vaika mandrobona ny famokarana fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia ampiasaina betsaka amin'ny fananganana ny famokarana. Ny fitaovana enti-manamboatra dia azo ampiasaina amin'ny dingan'ny fitrandrahana voalohany, faharoa ary ambaratonga faharoa. Ny karazan-tsolika mipoitra mipoitra mena Ny angom-basy mahery vaika misy ny vokatra dia ny sombin-tsoratry ny horizonta, ny tambatra mivadika ary ny fiantraikan'ny hammermill. Ny fiotazana angovo azo avy amin'ny horita dia manana rotora tokana na indroa, izay mety hifehezana ny fitaovana lehibe sy mahatsikaiky. Large horizontal ... hamaky bebe kokoa...
Fitrandrahana famokarana angon-drakitra
Ny angom-pamokarana angon-dabozia dia ny fitrandrahana famokarana angatra dia ahitana ny fitrandrahana, ny fako, ny tombontsoa hafa, ny fandikana, ny segregation, ny fitobohana ary ny fikarakarana. Ny fizotry ny famokarana angom-pamokarana manontolo amin'ny alàlan'ny fanodinana. Ny fanodinana dia miantraika amin'ny kalitao sy ny tsy fahampian-tsakafo, ny fananana ara-batana be dia be, ary, indrindra fa ny fandrefesana (fitantanana lehibe). Fitrandrahana ao amin'ny orinasa fanodinana Aggregate: Ny fomba fanodinana amin'ny famokarana angovo dia ahitana ny fanilihana, famokarana ... hamaky bebe kokoa...